Maraykanka oo qirtay tiro ka yar rayidka ku geeriyooday dagaallada Suuriya & Ciraaq – Kasmo Newspaper
Maraykanka oo qirtay tiro ka yar rayidka ku geeriyooday dagaallada Suuriya & Ciraaq
Updated - June 2, 2017 11:23 pm GMT
London (Kasmo), Weerarrada Maraykanka iyo xulifadiisu ka wadaan Suuriya iyo Ciraaq waxaa ku dhammaaday dad badan oo rayid ah oo an waxba galabsan.
Waaxda Gaashaandhigga Maraykanka “Pentagon” ayaa qiratay in tirada rayidka ku dhintay, laga soo bilaabo Agosto 2014, markii la bilaabay Hawlgalka “Operation Inherent Resolve” gaarayso 484, iyada oo 332 ka mid ahna dhinteen bilihii March iyo April ee sannadkan. Taas oo muujinaysa kororsiimo xagga weerarrada ah ilaa intii uu xafiiska qabsaday Madaxweyne Donald Trump.
Xogtani waxay ku soo baxday Warbixin-bileedkii u dambeysay ee Pentagon-ka, iyada oo wakaaladda Reuters soo warisay in Is-bahaysigu beeniyay in uu hoos u dhigay heerkii badbaadada rayidka, inta lagu jiro weerarrada lagu xoreynayo dhulka Daacish haysato.
Warbixintaas oo lagu qeexay shaxda hawlgalladii lagu fuliyay Daacish oo April 2017kii ahaa 19 weerar oo Suuriya ah iyo 13 Ciraaq ah, waxaa lagu sheegay in su-geyntooda lagu duqeeyay ceelal shidaal, baro Daacish, gaadiid, kuna dhinteen 132 rayid ah.
Bishii March 2017 waxay ahayd middii ugu xumayd oo duqayntii Mosul ee loo waday Daacish ay ku dhinteen 200 oo rayid ah, Maraykankuna qirtay khaladkaas 10 maalmood ka dib. Is-bahaysiga ayaa qaba in kororka dhimashadu ku imaanayo dagaallada oo ku sii xoogaysanaya goobaha dadku ku badanyahay, taas oo halista rayidka sare u qaadaysa.
Sheekadaas mid ka duwan waxaa qaba Ururka an dowliga ahayn “Airwars” ee kooxda warfidiyeennada ah hoggaamiyaan, kaas oo dusha kala socda hawlgallada Militari ee Suuriya iyo Ciraaq. Ururka Airwars ee fadhigiisu yahay Britain ayaa qaba in tirada runta ah ee ku geeriyootay hawlgallada Maraykanka iyo xulufadiisu gaarayso 3,817 qof oo haween iyo carruur fara badani ku jiraan.
Chris Wood, Agaasimaha Ururkaas ayaa sheegay in bishii 3aad oo xiriir ah oo weerarrada Maamulka Trump, geerida ugu badan ay ka dhacday agagaarka Raqqa, halkaas oo duqaynta Maraykanku ku badantahay, wuxuuna ku daray in ururkiisu ka walwalayo boqollaalka qof ee ku go’doonsan gudaha magaalada.